May 4, 2021 - Babal Khabar
May42021 by EditorNo Comments
भारततर्फ अक्सिजनको सिलिण्डर तस्करी गर्ने तीन जनालाई प्रहरीले गर्यो पक्राउ,यस्तो कार्बाही हुने
२१ वैशाख, जनकपुरधाम । भारततर्फ अक्सिजनको सिलिण्डर तस्करी गरेको आरोपमा प्रहरीले मंगलबार महोत्तरीमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्र २–०२–००१ च ०३१७ नम्बरको गाडीमा ७÷७ किलोको २ थान भरिएको अक्सिजन सिलिण्डर लैजाँदै गर्दा प्रहरीले जलेश्वर नगरपालिका १२ थरुवाहीबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धनुषाको जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका ७ बस्ने ३६ बर्षीय जमरुदिन राईन, वडा नम्बर २ बस्ने ५० बर्षीय दिनेश कुमार शर्मा र महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका ६ बस्ने विपिन चौधरी रहेको महोत्तरी प्रहरीका प्रवक्ता प्रकाश विष्टले बताए । सोमबार राति ८ बजेतिर भारततर्फ लग्ने क्रममा उनीहरुलाई अक्सिजनको सिलिण्डरसहित नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, जलेश्वर नगरपालिका–३ पश्चिोम मलिवाराबाट ३ थान भरिएको अक्सिजनको सिलिण्डर वेवारिसे अवस्थामा फेला परेको छ । प्रहरी प्रवक्ता विष्टका अनुसार न
एक नेपाली अनुसन्धानकर्ताले अमेरिकाको प्रतिष्ठित नेशनल साइन्स फाउण्डेशन (एनएसएफ)अवार्ड यस कारण पाएका
काठमाडौँ — एक नेपाली अनुसन्धानकर्ताले अमेरिकाको प्रतिष्ठित नेशनल साइन्स फाउण्डेशन (एनएसएफ)अवार्ड पाएका छन् । अमेरिकाको केन्टकी राज्यस्थित क्याम्बेल्सविल विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकको रुपमा कार्यरत भौतिकशास्त्री डा. इन्द्रदेव साहुले २ लाख ९७ हजार डलर (करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ) राशिको अवार्ड पाएका हुन् । अमेरिकाको संघीय सरकार मातहतको अमेरिकी राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान ले यो अवार्ड साहुलाई अनुसन्धातवृत्तिका लागि दिएको हो । पोटासियम च्यानल एसेसरी प्रोटिन(केसीएनई३) को संरचना र गतिशिलताको अध्ययनका लागि साहुले यो अनुदान पाएका हुन् । केसीएनई३ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रोटिन रहेको साहुले कान्तिपुरलाई बताए । ‘यो प्रोटिन स्वास्थ्य रोगसँग सम्बन्धित छ । विशेष गरी मुटुसँग सम्बन्धित प्रोटिन पनि हो,’ उनले कान्तिपुरसित फोन कुराकानीमा भने,‘यो प्रोटिनको अध्ययनले मुटु सम्बन्धीको गतिशिलता अध्ययनमा थप जान
सबै सवारी पास खारेज गरि भोलिदेखि यस्तो छ नयाँ व्यवस्था (सूचनासहित)
उपत्यकामा निषेधाज्ञाको समयमा आवतजावत गर्न यसअघि जारी भएका सबै सवारी पास खारेज भएका छन्। उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भोलिबाट लागु हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरेकाले यसअघिका सवारी पास खारेज गरेका हुन्। बैशाख २२ गतेबाट सुरु हुने नयाँ व्यवस्था बैशाख २९ गते रातिसम्म लागु हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ। अब उपत्यकाबाहिर जानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य १० दिन क्वारेन्टिन राख्ने प्रतिवद्धता सहित सिफारिस दिएमा गन्तव्यसम्म जान दिने निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ। तर उपत्यकामा भने फुटपाथ तथा खुल्ला ठाउँ, ठेलागाडा वा साइकलमा संचालन हुने व्यापार व्यवसाय पनि बन्द गरिएको छ। यस्तो छ नयाँ व्यवस्था: सबै सवारी पास खारेज, भोलिदेखि यस्तो छ व्यवस्था (सूचनासहित)
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत लिन संसदमा आउँदा किन गर्यो? जसरी भएपनी असफल गराउने निर्णय ।
२१ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत लिन संसदमा आउँदा असफल गराउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस पदाधिकारीहरुको मंगलबार बसेको बैठकले नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बोलाएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ । बैठकपछि सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, विश्वासको मत प्रयोजनका लागि संसद बोलाउने काम भएको छ, यसमा ओलीलाई फेल गराउन लाग्ने कुरा भएको छ । साभार : onlinekhabar
खुशीको खबर कोरोना बिरामी बढेसगै सुरु भयो अक्सिजन बैंक,कहाँ – कहाँ पाइन्छ?हेर्नुहोस्।
तिलोत्तमा — रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले मंगलबारदेखि अक्सिजन बैंकको सुरुवात गरेको छ । उपमहानगरभित्र होम आइसोलेसन, होटल आइसोलेसन तथा उपमहानगरको संस्थागत आइसोलेसनमा बसेका कोभिड संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यक परेमा तत्काल स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोलीले अक्सिजन पुर्‍याउने गरी उपमहानगरमा अक्सिजन बैंक सेवा शुभारम्भ गरिएको उपमहानगरका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले बताए । 'अहिले पहिलो लटमा १ सय वटा सिलिण्डर खरिद गरेका छौं,' उनले भने,'खपतको आधारमा बढाउने, रिफिल गर्ने र सेटअप गर्नेगरी थालनी भएको हो ।' पहिलो चरणमा १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको भन्दै उनले अक्सिजन रिफिलमा लायन्स क्लब एरिया फोरले सहयोग गर्ने बताए । अक्सिजन बैंक बिरामीसम्म पुर्‍याउन, जडान र रेखदेखमा उपमहानगरका ८ शहरी स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी र ८ उपमहानगरले थप गरी खटाएका कर्मचरीले बैंक अन्तर्गत काम गर्ने उनले जनाए । स
झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवासँग ‘फ्लोर क्रस’ गरेर ओलीसत्ता ढाल्ले आस्वासन दिए : देउवा निकट स्रोत
काठमाडौं – प्रधाननमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहित संघीय संसद्का २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र काटेपछि उनीहरूको सांसद पदलाई लिएर अनेकौँ प्रश्न र अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । दुई दिनभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । पत्रकाटिएकै दिन नेकपा एमालेले सांसद सदस्यबाट समेत कारवाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकै दिन पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन् । देउवा निकट स्रोतका अनुसार कानुनी रुपमा सांसदपद नजाने भएकोले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर ओलीसत्ता ढाल्ले आस्वासन दिएको जानकारी दिए । खनाल र नेपालको आस्वासनसंगै देउवा पनि प्रधानमन्त्रीका लागि उत्साहित भएका छन् । अवको केही दिनमै माओवादी केन्द्रले पनि वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिने तयारी गरेको छ । माओवादीले सत्
अनौठो व्यक्ति डाक्टरले नै पत्ता लगाउन नसकी परे चकित: बालकको शरीरमा चम्चा सिक्का तथा थुप्रै चीजहरू सजिलै चुम्वकमा जस्तै टाँसिन्छन् ।
सुन्दा पनि पत्यार नलाग्न सक्छ । बोस्निया–हर्जगोभिनामा एक बालक छन् उनको नाम एर्मान डेलिक्स हो । ती बालकको शरीर चुम्वक जस्तै छ । उनको शरीरमा चम्चा सिक्का तथा थुप्रै चीजहरू सजिलै टाँसिन्छन् । ती बालकको शरीर देखेर डाक्टरहरू तीन छक परेका छन् । ती बालकका बाआमा पनि छोराको यस्तो अस्वभाविक कृत्य देखेर हैरान छन् । उनका परिवारले उनलाई डाक्टरको देखाउन लग्दा डाक्टरहरू तीन छक्क परेका हुन् । बच्चाको शरीरबारे अध्ययन गरेपनि डाक्टरहरूले बच्चालाई यस्तो हुनुको कारणबारे कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । कार्टुन र स्वैरकाल्पनिक कथाहरूमा मात्र यस्ता चरित्रहरू यदाकदा पाइने गरेका छन् जसको शरीरमा धातुहरू टाँसिन्छन् । चिकित्सक र बैज्ञानिकहरूदे मान्छेको शरीरमा भएको एकखालको ग्रिजी (चिप्लो) छालाको कारण यसरी सामानहरू टाँसिएको मान्ने गर्छन् ।
प्राकृतिक रुपमा नै अक्सिजन बढाउन यस्तो गरौ : श्वासप्रश्वास तथा छाती रोग विशेषज्ञ डा. रक्षा पाण्डे
काठमान्डाैं / श्वासप्रश्वास तथा छाती रोग विशेषज्ञ डा. रक्षा पाण्डेका अनुसार फोक्सोको सबभन्दा गह्रौं भाग हाम्रो पछिल्तिर हुन्छ । त्यसैले उत्तानो पारेर राख्दा बिरामीलाई पर्याप्त अक्सिजन तान्न कठिन हुन्छ भने घोप्टो पार्दा अक्सिजनको प्रवाह बढ्न गई फोक्सोका विभिन्न भाग सक्रिय हुन पाउँछ । यस्तै गिलासको पानीको सहायताले पनि अक्सिजनको मात्रा बढाउन सकिन्छ । डा. पाण्डेका अनुसार यसका लागि सुरुमा गिलासमा पानी राख्नुपर्छ र मुखमा बाहिरको हावा भर्नुपर्छ । त्यसपछि गिलासको पानीमा विस्तारै मुखको हावा छोड्ने गर्दा अक्सिजनको मात्रा बढाउन सकिन्छ । यता कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका अनुसन्धान अधिकृत डा. अमितमान जोशीले वैज्ञानिक रूपमै पुष्टि भइसकेका श्वासप्रश्वास विधि घरमा आइसोलेसनमा बसेका सबैले अपनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “शरीरमा अक्सिजनको मात्रा ९४ भन्दा बढी हुनुपर्छ । यसका लागि
अमिक शेरचनले प्रदेश प्रमुखबाट पदमुक्त हुन पाउँदा आफू यस कारणा खुसी भएको भनी यस्तो खुलासा गरे
२१ वैशाख, पोखरा । अमिक शेरचनले गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट पदमुक्त हुन पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताएका छन् ।अधिकारविहीन खुला जेलबाट मुक्त भएको उनले बताएका छन् । आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने, ‘पदमुक्त भएकोमा अत्यन्त खुसी छ । मुरी–मुरी धन्यवाद छ राष्ट्रपति ज्यूलाई ।’ उनले भने, ‘पहिला ओली जी र पुनः प्रचण्ड जीमार्फत् ओलीजीको प्रस्ताव मैले अस्वीकार गरेको पद थियो यो । पछि पार्टीको निर्णयसुनाएपछि अनुशासित कार्यकर्ताको नाताले बाध्य भई स्वीकारको पद हो यो । अधिकारविहीन खुला जेलबाट पदमुक्त गरिदिनु भएकोमापुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु राष्ट्रपतिज्यूलाई ।’ सरकारले माओवादी केन्द्रका नेता शेरचनलाई गण्डकी प्रदेशको प्रमुखबाट सोमबार हटाएको थियो । सो पदमा एमाले नेता सीतापौडेललाई नियुक्त गरिएको छ । आफू पदमुक्त भएको जानकारी मिडियामार्फत् पाएको बताउँदै उनले पदमा रहँदा कुनै असंवैधानिक काम नगरेको जिकीर गर
माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सको जिवनमा घटेको घटनाले दुनियाँलाई नै रुवयो
२१ वैशाख, काठमाडौं । माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक बिल गेट्स र उनकी पत्नी मेलिन्डा गेट्स सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । २७ वर्षको वैवाहिक सम्बन्ध तोडिएको जानकारी उनीहरुले सामाजिक सन्जालमार्फत् दिएका हुन् । बिल गेट्सले ट्वीटरमा संयुक्त वयान सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा लेखिएको छ, ‘धेरै सोचविचार गरेर हामीले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धलाई अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ बिल र मेलिन्डाको पहिलो भेट सन् १९८० को दशकको अन्तिमतिर भएको थियो, जतिबेला मेलिन्डाले माइक्रोसफ्ट कम्पनीमा जागिर सुरु गरेकी थिइन् । उनीहरुका तीन सन्तान छन् । दुवै मिलेर बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउन्डेसन चलाउँदै आएका छन् । सम्बन्ध विच्छेद गरे पनि फाउन्डेसनका लागि भने दुवै मिलेर काम गर्ने उनीहरुले जानकारी दिएका छन् ।